Izay no maha tsara ny asa-tanana
Ny zaitra dia mety ho an'izay tsy mahatsapa lamaody ivelan'ny talantalana. Na dia iharan'ny sary tsy mitombina lava aza io karazana asa-tanana io dia niverina amin'ny lamaody indray izy ankehitriny. Ny lamba na fitaovana hafa dia atambatra amin'ny tanana na milina fanjairana. Ny fisafidianana lamba sy lamina maroloko dia lehibe tokoa, izay ahafahana manamboatra akanjo, ondana sofa na biby mihombo aza.
Raha te-hanao io asa-tanana io ianao dia mila kasety fandrefesana, kofehy, fanjaitra ary hety ho an'ny mpanjaitra ary koa milina fanjairana. Ny haingo manokana an'ny sombin-javatra vita dia azo tanterahina amin'ny basy lakaoly mafana na lakaoly lamba.
Ny knitting dia malaza amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe: manomboka amin'ny akanjo baoty, satroka sy ba kiraro ka hatramin'ny scarf vita am-pelatanana - asa-tanana no filaharana. Betsaka ny torolàlana DIY azo jerena amin'ny Internet, ahafahana mamehy ny fanamby rehetra mifandraika amin'ny fanjaitra knitting.
Hanombohana dia ny volon'ondry, ny fanjaitra ary ny fitaomam-panahy amin'ny akanjo iray no ilainao - indrindra ny zavatra tsotra toy ny scarf dia azo ianarana haingana rehefa manao asa-tanana. Ny fametahana satroka ho anao na ny pataloha mafana ho fanomezana ho an'ny namana na olom-pantatra dia miala sasatra mahafinaritra.
Ny fianarana manao voan'akanjo dia mora be ary hahafaly ny vao manomboka. Needlework dia fialamboly mora sy mahafinaritra miaraka amina foto-kevitra sy fanazaran-tena vitsivitsy. Izany dia mitaky tadim-bolongana sy kofehy izay amoronana zaitra maromaro, izay mifamatotra miaraka ary miteraka lamina iray.
Toy ny amin'ny fanjairana, ny mpihazona vilany, ny akanjo ba na ny sarondoha dia azo voaravaka amin'ny asan-tànana, fa ny mahasamihafa azy kosa dia eo amin'ny fanjaitra: Mifanohitra amin'ny fanjaitra knitting, ny fanjaitra fehikibo dia manana farango eo amin'ny tendrony.
Ny asa tanana dia mahasalama amin'ny vatana sy saina - voaporofo ara-tsiantifika izany. Ny tanora manokana dia mahita ny fitiavany izay heverina ho fampakaram-bady sy fifanakalozana torolàlana, toro-hevitra ary fika amin'ny fialambolin'izy ireo farany amin'ny forum na kafe any an-trano.
Fa ny fampihenana ny adin-tsaina dia ampiroboroboana amin'ny asa-tanana ihany koa: ao amin'ny fiarahamonina ankehitriny, ny adin-tsaina, ny hafainganam-pandeha ary ny fahaiza-manao dia ilaina ny fampihetseham-batana toy ny yoga, fisaintsainana na asa-tanana. Mandritra ny fotoana maharitra, ireo fomba ireo aza mampihena ny tosidra.
Raha ny tokony ho izy dia manofana ny fahaizanao mitadidy sy fahatsiarovana ny fanaovana baoty akanjo ba na pataloha. Ny olona sasany dia manadino kokoa amin'ny fahanterana noho ny sasany izay mbola mahatadidy betsaka na dia eo amin'ny 80 taona aza. Tsy ny fototarazo ihany no tompon'andraikitra amin'ireo fahasamihafana ireo, fa koa ny fomba fampiofanana sy fampiasantsika ny fitadidiantsika. Ny hetsika mavitrika toy ny famakiana na fanaovana asa-tanana dia mitazona ny saintsika ho be atao.
Amin'ny ankapobeny dia azo lazaina fa ny asa-tanana dia manana tombony lehibe amin'ny fihenan'ny fahatsiarovana na ny fihenjanana. Ny fitaovana takiana amin'izany dia mora vidy tokoa. Farany, ny mpanjifa tsirairay dia afaka manapa-kevitra samirery raha tena te hanomboka asa tanana izy, fa tsy misy fatiantoka manamarika.
Fiainana manan-tsaina miaraka amin'ny trano manan-tsaina
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 22. Jolay 2020 15. Jolay 2021 Sokajy Vola, vola ary asa, tokantranoKeywords DIY, Ataovy izany, Crochet, handwork, tenona samy hafa soratra, manjaitra, knitting
indray Lahatsoratra taloha: Fialantsasatra amin'ny toeram-piompiana | fialan-tsasatra
more Lahatsoratra manaraka: Hiran'ny ankizy | Mozika ho an'ny ankizy